स्तनपान अमृत समान Loading... अतुल मिश्र
Published on September 3, 2016 at 1:55 pm
पत्याउनुहुन्छ ? आमाको स्तनमा शिशुलाई जतिखेर जस्तो चाहियो ठिक त्यस्तै प्रकारको दूध आफैँ तयार भइरहेको हुन्छ । आमाको दूध विश्वको एक मात्र यस्तो खाद्य पदार्थ हो, जुन उचित समय, उचित ठाउँ, उचित मात्रा र उचित तापक्रममा उपलब्ध भइरहेको हुन्छ । आमाको दूधमा बच्चाको उमेर, आवश्यकता, रोग लाग्न नदिने गरी विभिन्न तत्त्वहरूको मात्रा स्वचालित रूपमा निर्धारण भइरहेको हुन्छ । यसैले होला, सामान्य अवस्थामा मात्र नभई समयअगावै जन्मेका बच्चाहरूको लागि समेत उसकै आवश्यकता अनुसार आमाको दूध बन्ने गर्छ । अझ कम तौल भएका बच्चाको लागि समेत उसलाई फाइदा पुग्ने गरी आमाको दूध निर्माण भइरहेको हुन्छ ।
यति मात्र नभई, आमाको दूधमा भएको एक प्रकारको ‘अम्ल’ शिशुको मस्तिष्कको विकासका लागि अत्यावश्यक हुन्छ । शिशु जन्मेको प्रारम्भिक केही महिनासम्म स्तनपान गर्ने शिशुको ज्ञान सम्बन्धी विकास राम्रो हुन्छ । अर्थात्, आमाको दूध खाएका शिशु बढी बुद्घिमान् हुन्छन् ।
जन्मदेखि ६ महिनासम्म शिशुलाई पानीबसमेत चाहिँदैन । मात्र आमाको दूध भए पुग्छ । आमाको दूधमा पर्याप्त पानी भएकोले जन्मको ६ महिनासम्म आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै पनि कुरा दिनु हँदैन । गर्मी मौसम वा गर्मी ठाउँहरूमा समेत ६ महिनासम्म आमाको दूधबाहेक अन्य कुनै पनि वस्तु खुवाउनु हुँदैन ।
बट्टाको दूध त्यो पनि बोतलबाट खानेहरूमा झाडापखाला, निमोनिया बढी हुन्छ । कथंकदाचित कुनै विशेष परिस्थितिमा बट्टाकै दूध खुवाउने बाध्यता आए यसलाई बोतलको माध्यमले खुवाउनु हँदैन । यस्तो स्थितिमा बट्टाको दूधलाई चम्चा र कचौराको प्रयोग गरेर खुवाउनुपर्ने जनाउँदै डा. अर्याल भन्छन्, ‘बोतलमा दूध खानेहरूमा झाडापखाला, निमोनिया आदि अन्य शिशुको दाँजोमा धेरै बढी हुने गरेको पाइएको छ ।’
क्यान्सर पीडित १२ वर्षीय उत्सव धिमालका लागि डेढ लाख संकलन